စပိန်၏ ရိုးရာအစားအစာများ- အာလူး omelette မှ Santiago ကိတ်မုန့်အထိ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | Espana, gastronomy
အ စပိန်၏ ရိုးရာအစားအစာများ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျော်ကြားသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ စားသောက်မှုပုံစံသည် နိုင်ငံတကာမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါမည်။ တကယ်တော့၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ စပိန်စားဖိုမှူးတော်တော်များများဟာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ငြူစူစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်သလဲ ပြင်သစ်သည် ဟော့တီဟင်းလျာများ၏ ဘုံဗိမာန်ဖြစ်သည်။.
သို့သော်၊ ပုံမှန် စပိန်အစားအစာများတွင် ၎င်း၏အမြစ်များရှိသည်။ အစဉ်အလာ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ အာဟာရလိုအပ်ချက်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည် လယ်ကွင်းများတွင် ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ခွန်အားပြန်လည်ရရှိရန် အရသာရှိသောဟင်းလျာများကို စားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အရသာရှိသော ကယ်လိုရီများသည့် အစားအသောက်ပုံစံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး ယင်း၏ဟင်းလျာများသည် စပိန်၏ပုံမှန်အစားအစာများဖြစ်သည့် စစ်မှန်သောသင်္ကေတများဖြစ်လာသည်။ အဲဒီထဲက တချို့ကို ငါတို့ မင်းကို ပြမယ်။
1 အာလူး omelette သည် စပိန်နိုင်ငံ၏ ရိုးရာအစားအစာများ၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။
2 အဆိုပါ paella
3 Asturian bean stew
4 ပုံမှန်စပိန်အစားအစာ၏နောက်ထပ်သင်္ကေတ Gazpacho
5 ကော့ဒ်အယ်လ် pil pil
7 ဆန်တီယာဂိုရဲ့ ကိတ်မုန့်
အာလူး omelette သည် စပိန်နိုင်ငံ၏ ရိုးရာအစားအစာများ၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။
အရသာရှိပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ဒီဟင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစာအိမ်ရဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ အကျော်ကြားဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဇာစ်မြစ်ကို မသိရသေးပါဘူး။ ကျေးဇူးပါ။ အင်ဒီတို့၏ရာဇဝင်ချုပ်များအောင်နိုင်သူတွေရော ဒေသခံတွေရော ကြက်ဥ မုန့်ညက် စားသုံးနေပြီဆိုတာ ငါတို့သိတယ်။
၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်၊ အာလူးသည် Incas ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း Hispanics မှသိသောတောင်အမေရိကမှဥဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤဟင်းလျာ၏ ပထမဆုံး အတိအလင်း ဖော်ပြချက်မှာ 1817 ခုနှစ်မှ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လယ်သမားများ စားသုံးသည်ဟု ဆိုထားသည့် Cortes de Navarra သို့ လိပ်မူထားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုက အာလူးဥမုန့်ကို Carlist ဗိုလ်ချုပ်က တီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Zumalacarregui Bilbao ကိုဝိုင်းရံနေသောသူ၏တပ်များငတ်မွတ်မှုကိုကျေနပ်စေရန်။
သို့သော်လည်း ဤ tortilla အမျိုးအစားသည် စပိန်တစ်ခွင်လုံးတွင် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဒေသခံများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အရသာရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏အမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတွင်ကြက်ဥ၊ အာလူးနှင့်ကြက်သွန်နီတို့ပါဝင်သည်။ အလားတူ အခြားသောမျိုးကွဲများဖြစ်သည့် ၎င်းမှ လာပါသည်။ Tortilla Paisanachorizo, အနီရောင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပဲစေ့များပါဝင်သည်။
သေချာတာကတော့ ဒီဟင်းက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စပိန်ရဲ့ ပုံမှန်အစားအစာအဖြစ် လူကြိုက်အများဆုံးပါ။ တကယ်တော့ အဲဒါကို စဉ်းစားတာ။ နိုင်ငံတကာမှာ အများဆုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာအိမ်ပညာ ၎င်းသည် စပါးများ ပေါများစွာ စိုက်ပျိုးသည့် Levantine ဒေသတွင် ဇာတိဖြစ်သည်။ အာရပ်လူမျိုးများနှင့်အတူ XNUMX ရာစုအတွင်း Iberian ကျွန်းဆွယ်သို့ ဆန်ရောက်ရှိမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဤချက်ပြုတ်နည်း၏မူလအစမှာ အာလူးဥခူး၏ထက်ပင် ဟောင်းနေပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ paella ၏အသိပညာကို XNUMX ရာစုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ ဗလင်စီယံဆန်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအချိန်က အခြားဒေသများတွင် မျိုးကွဲများဖြင့် ပုံတူကူးထားသောကြောင့်ပင် လူကြိုက်များနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တိကျစွာ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများရှိသည့် ဟင်းလျာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ မင်းကို ပြောစရာ မလိုဘူး။ ပင်လယ်စာ၊ ကြက်သား သို့မဟုတ် အသား paellaဥပမာ သုံးခုလောက်ပေးမယ်။
သို့သော်၊ မူရင်းဖြစ်သည့် Valencian paella တွင် ဤထုတ်ကုန်များ မပါဝင်ကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်။ ၎င်း၏ ချက်ပြုတ်နည်းသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ အများအပြားပါရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဆန်၊ ယုန်၊ ကြက်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သံလွင်ဆီ၊ ရွှေဝါရောင်၊ ဆားနှင့် ရေတို့ကို အခြေခံကိုးချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ paprika၊ artichoke၊ rosemary နှင့် ခရုများကိုပင် ခွင့်ပြုထားသည်။
စပိန်နိုင်ငံ၏ ပုံမှန်အစားအစာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Asturian bean stew
ဒီမြောက်ပိုင်းဟင်းလျာကို ကမ္ဘာအနှံ့ လူသိများပါတယ်။ ငါတို့အရင်က မင်းကိုပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူ့ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းက အတိအကျပဲလေ။ ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက် အပူချိန်နိမ့်ကျပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လေ့ရှိသော ရှေးခေတ် Asturians များဖြစ်သည်။
ပဲအမျိုးမျိုးကို စားသုံးသော်လည်း၊"ဖာဘတ်စ်") Asturias တွင် XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်၊ မှတ်တမ်းအထောက်အထားမရှိသော်လည်းအချို့သောပညာရှင်များအဆိုအရ fabada ကို XNUMX ရာစုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ရေးသားဖော်ပြချက်ကို Gijón သတင်းစာတွင် တွေ့ရှိရသည်။ အယ်လ် Comercio 1884 တွင်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အခြားစားသောက်ကုန်ပညာရှင်တို့က ထိုဟင်းကို XNUMX ရာစုအကုန်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၎င်းသည် ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် အပြင်းထန်ဆုံး ဟင်းချက်နည်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ paprika၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ ရေတို့ ပါဝင်ရုံသာမကဘဲ လူကြိုက်များတာကြောင့်ပါ။ ကသောင်း. ၎င်းကို ပဲအမျိုးမျိုးဖြင့် ချက်ပြုတ်ထားသည့် chorizo၊ အနက်ရောင်ပူတင်း၊ ဝက်သားခုံးနှင့် ဘေကွန်တို့ အများအပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပဲစွပ်ပြုတ်ဆိုတာ လူကြိုက်များတဲ့ပညာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်နေ့ အရသာ ပိုကောင်းတယ်။. ဆိုလိုသည်မှာ၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီကြာအောင် ထားထားလျှင် ဟင်းက ပိုအရသာရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒီဟင်းချက်နည်းဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကျော်ကြားမှုကိုလည်း ရရှိထားပြီး ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မက္ကဆီကိုမှာ အလားတူရှိတယ်။ အရူးတွေ ဘရာဇီးမှာ ကဗျာ.
စပိန်ဟင်းလျာများ၏ နိုင်ငံတကာဟင်းလျာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ အမှုကိစ္စက လာတာ Andalusiaမွတ်ဆလင်များနှင့်အတူ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်တကယ်တော့ စားသုံးနေပြီဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ အယ်လ် Andalus ရှစ်ရာစုတွင်။ သို့သော် ဟင်းချက်နည်းမှာ ယခုနှင့်မတူတော့ပါ။ လက်ရှိပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုသည် ခရမ်းချဉ်သီးဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ ၎င်းသည် သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် အမေရိကမှလာသည်။
၎င်းနှင့်အတူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပေါင်မုန့်၊ သံလွင်ဆီ၊ ရှာလကာရည်၊ ဆားနှင့်ရေသည်ဤအရသာရှိသောအအေးဟင်းချိုကိုဖန်တီးသည်။ ဒါပေမယ့် သခွားသီးနဲ့ ကြက်သွန်နီကိုလည်း ထည့်ထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤဟင်းလျာသည် ဧရိယာ၏ ထူးခြားသော အသွင်တူမျိုးကွဲများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြို့သားတွေရဲ့ အလုပ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ပြင်းထန်သောအပူ နွေရာသီတွင် Andalusia တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ အဲဒါကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ဒီဟင်းချက်နည်းကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ အအေးနှင့်လန်းဆန်းသောဟင်းချို.
ယခင်ဟင်းလျာများကဲ့သို့ပင်၊ gazpacho သည်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ Castilla La Mancha၊ Extremadura နှင့် Aragón ကဲ့သို့သော စပိန်နိုင်ငံ၏ အခြားဒေသများစွာတွင် မျိုးကွဲများသာမက အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မက္ကဆီကိုမှာ Morelian gazpachoအသီးအနှံတွေနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဧရိယာထဲက အသီးအနှံတွေပါ။ MoreliaMichoacán ပြည်နယ်၏မြို့။
ကော့ဒ်အယ်လ် pil pil
ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် ကော့ဒ်သည် စပိန်နိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများတွင် စားသုံးသော တစ်ခုတည်းသောငါးဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ရေခဲသေတ္တာမရှိသောအချိန်၌ ဆားငန်ခြင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် ကမ်းရိုးတန်း၏ဝေးလံသောနေရာများသို့ ပို့ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဒီဟင်းချက်နည်းကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ Basque အဘိဓါန်အစားအစာစပိန်နှင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ စပိန်၏ပုံမှန်အစားအစာတို့တွင်အတူလုပ် ငါး၊ သည် Euskadi ၏ လက်ရာမြောက်သော အစာအိမ်ဗေဒ၏ အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အကျော်ကြားဆုံး ဟင်းချက်ဖြစ်သည်။
သူ့ကိစ္စမှာ ဇာစ်မြစ်ကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ 1835 ခုနှစ်တွင် Bilbao ကုန်သည်တစ်ဦးအမည်ရှိ Simon Gurtubay အရည်အသွေးမြင့် ကော့ဒ်တစ်ရာ သို့မဟုတ် တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ကို မှာကြားခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့သည် သူ့ကို ငွေကျပ် တစ်သန်းထက် မနည်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ ပြန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဒေဝါလီခံလိုက် ဒါမှမဟုတ် ဉာဏ်ထက်မြက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထုတ်ကုန်ကို ထုတ်ဖို့အတွက် သူက ရိုးရှင်းပြီး အရသာရှိတဲ့ ဟင်းချက်နည်းကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ကော့အယ်လ် pil pil. Gurtubay သည် အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ချမ်းသာလာခဲ့သည်။
သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဤဟင်း၏အမည်သည် onomatopoeic ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ သံလွင်ဆီသည် ငါးဂျယ်လာတင်နှင့် ပေါင်းလိုက်သောအခါ Pil pil သည် ပွက်ပွက်ဆူနေသော အသံကို ပြန်ထုတ်ပေးသည်။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဟင်းချက်ချက်တွင် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးနှင့် ငရုတ်သီးတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ဒီလိုပဲ ဒီရိုးရာ ကော့ဒ်ဟင်းချက်နည်းကိုလည်း ချက်လုပ်ထားတာ သစ်ပင်ကြီး ငံပြာရည် ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ဆောင်ရန်လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။
A Madrid စွပ်ပြုတ်
၎င်းသည် ယခင်ကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားတွင် ရေပန်းစားမည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းကို မစမ်းဘဲ မက်ဒရစ်မှ ထွက်ခွာသွားသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ မရှိကြောင်း သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် စပိန်၏ ပုံမှန်အစားအစာများထဲမှ မှန်ကန်ကြောင်း သံသယရှိစရာမလိုပေ။ ၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း ကုလားပဲCarthaginians များက Iberian ကျွန်းဆွယ်တွင် မိတ်ဆက်ပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ စွပ်ပြုတ်များအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ပထမဆုံးအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Sephardic adfinaကုလားပဲကို သိုးသားနဲ့တွဲထားတဲ့ ကုလားပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ မက်ဒရစ် စွပ်ပြုတ်ရဲ့ သမိုင်းဝင် ဟင်းရည်ကတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ La Mancha မှအိုးပုပ်. အလယ်ခေတ်တွင် ချက်ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်သော ဤဟင်းတွင် ပဲပင်များ (ဤကိစ္စတွင် ပဲနီ) နှင့် မတူညီသော အသားများ ပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Madrid စွပ်ပြုတ်ကို ကုလားပဲ၊ အသီးအနှံများနှင့် သီးခြားစီပြင်ဆင်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အသားပေါင်းထည့်ထားသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် chorizo၊ အနက်ရောင်ပူတင်းနှင့် ဝက်သားဘေကွန်၊ ကြက်သားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝက်သားခွံများ။ သို့သော် ၎င်း၏မူလအစတွင်၊ Madrid စွပ်ပြုတ်သည် လူကြိုက်များသော ဟင်းဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်အားဖြင့် ပို၍နှိမ့်ချသည်။
Madrid စားသောက်ဆိုင်များ၏ မီနူးများတွင် ဟင်းလျာများ စတင်ပေါ်လာချိန် ၁၉ ရာစုတွင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ အတိအကျပြောရရင် အဲဒီအချိန်က ဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်က ကမ်းလှမ်းတယ်။ ကြမ်းသည်။ မြို့တော်ကနေ။ ထို့ကြောင့် အထက်တန်းစားများသည် ယနေ့ Madrid ၏ အချက်အပြုတ်သင်္ကေတဖြစ်သည့် ဤအရသာရှိသော ဟင်းလျာနှင့် ရင်းနှီးလာကြသည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိုသည်မှာ၊ စပ်စုချင်စရာကောင်းသော၊ မက်ဒရစ်စွပ်ပြုတ်သည် အသားများကို သီးခြားစီစားပါက နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးမျိုးအထိ ကွဲသွားသည့် ဟင်းပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ XNUMX ရာစုတွင် ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းရည်ကို "primer overturn" ဟုခေါ်တွင်ပြီး လင်းနို့ မချက်ပြုတ်မီ စားသုံးသော အသီးအနှံနှင့်။
လွဲချော်လို့မရပါ dulce ဤတင်ဆက်မှုတွင် သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော စပိန်နိုင်ငံမှ ပုံမှန်အစားအစာများ။ ငါတို့ မင်းအကြောင်းပြောလို့ရတယ်။ casadiellas Asturian, ဇာ ပိုးသတ်ဆေး Andalusia နှင့် Extremadura ၏၊ အဆီများ Levantine သို့မဟုတ် of the Sobaos Cantabrians။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ စန်တီယာဂိုရဲ့ကိတ်မုန့်, မှ Galicia.
XNUMX ရာစုမှာ ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်နေပါပြီ။ တော်ဝင်ကိတ်မုန့် အလားတူပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်၊ ဤအမွှေးအကြိုင်အတွက်ပထမဆုံးရေးထားသောချက်ပြုတ်နည်းများသည် XNUMX ရာစုမှဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ စန်တီယာဂို၏လက်ဝါးကပ်တိုင် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်၎င်းသည် ပို၍ မကြာသေးပါ။ ၎င်းသည် 1924 ခုနှစ်တွင် Compostela Casa Mora ၏စိတ်ကူးဖြစ်သည်။
Santiago ကိတ်မုန့်၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း ဗာဒံစေ့. ၎င်းတို့နှင့်အတူ သကြား၊ ဥ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့် သံပုရာ သို့မဟုတ် လိမ္မော်ခွံတို့ ပါဝင်သည်။ ဤရိုးရှင်းသော ချက်နည်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရသာအရှိဆုံး အချိုပွဲများထဲမှ တစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ဟင်းပွဲတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စပိန်၏ ရိုးရာအစားအစာများ. သို့သော် မလွဲမသွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကဲ့သို့ inkwell တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အစအန ၎င်း၏ မတူညီသော ဒေသမျိုးကွဲများတွင်၊ လှော်ငရုတ်ကောင်းသုပ် Catalonia ၏ Castilian နှင့် Aragonese နို့စို့သိုးသငယ် (တာနာစကို) ဟုခေါ်သည်။ ပန် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်ငံပြာရည်အတွက် hake. အထူးတလည်ဖော်ပြခြင်းခံရပါသည်။ Jamonဒါပေမယ့် ဒါက ဟင်းချက်နည်းမဟုတ်ဘဲ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။ အဲဒါတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်သလို မခံစားဖူးဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » စပိန်၏ ရိုးရာအစားအစာများ
လှပသော Malaga မြို့များ